Shiinaha Maxaan ka yeelnaa COVID 19 Alaab-qeybiyeyaal | Guanglei
Maxaan ka yeelnaa COVID 19
Dhamaanteen waan ognahay in dadka aduunka ku nool ay helayaan talaal ka dhan ah COVID 19. Taas macnaheedu ma aha inaan nabad qab ku filan nahay mustaqbalka? Xaqiiqdii, qofna ma hubin karo markaan shaqeyn karno oo aan si xor ah u bixi karno. Weli waan arki karnaa inay jiraan wakhti adag oo hortayada ah oo aan u baahan nahay inaan ogaano inaan iska difaacno gudaha iyo dibaddaba.
Maxaa inala gudboon hadda?
1. Qaado tallaalka COVID-19 sida ugu dhakhsaha badan ee aad u awooddo haddii ay suurogal tahay. Si aad u ballansatid ballanta tallaalkaaga COVID-19, booqo bixiyeyaasha tallaalka adeegyada jadwalka internetka. Haddii aad su'aal ka qabto jadwalka ballanta tallaalkaaga toos ula xiriir bixiye tallaal.
2. Xidho maaskaro wajiga markaad banaanka ka joogto xitaa waxaad qaadanaysaa tallaalkaaga. Covid-19 ma baabi'i doono muddo gaaban, si adiga iyo reerkaaga si wanaagsan aad u ilaalisaan, xirashada maaskaro wajiga marka ay banaanka u soo baxaan runtii waa lagama maarmaan.
3. Ku isticmaal sifaynta hawada gudaha. Xaaladda neefsashada, COVID-19 sidoo kale waxay ku faaftaa dhibcaha. Markay dadku hindhisaan ama qufacaan, waxay ku sii daayaan dhibco dareere ah hawada ay ku jiraan biyo, xab, iyo walxaha fayrasku ku jiro. Dad kale ayaa markaa ku neefsada dhibcahaas, fayraskuna wuu ku dhacaa. Khatartu waxay ugu badan tahay meelaha gudaha ku badan ee dadku ku badan yihiin hawo fiicanaana leh. Hoos waxaa ku yaal sifudud hawo caan ah oo leh shaandhada HEPA, anion iyo nadiifinta UV.
1) Shaandhaynta HEPA waxay si hufan u qabataa qaybaha cabirka (oo aad uga yar) fayraska keena COVID-19. Waxtarka leh 0.01 micron (10 nanometer) iyo wixii ka sareeya, miirayaasha HEPA, shaandhee qurubyada kujira cabirka cabirka 0.01 micron (10 nanometer) iyo wixii kabadan. Feyraska sababa COVID -19 wuxuu qiyaas ahaan yahay 0.125 micron (125 nanometers) dhexroor, kaasoo si isku mid ah ugu dhaca inta u dhexeysa cabirka cabbirka ee HEPA ay miirayaasha ku qabato si hufan oo aan caadi aheyn.
2) Isticmaalka shaandhada ionizing ee Sifeeyaha Hawada waxay ka caawisaa ka hortagga wax ku oolka ah ee hargabka laka qaado. Qalabku wuxuu awood u siinayaa fursado gaar ah oo si dhaqso ah oo fudud fayras looga soo saaro hawada wuxuuna bixiyaa fursado si isku mar loo aqoonsan karo lagana hortagi karo gudbinta hawada ee fayrasyada.
3) Sida laga soo xigtay cilmibaarisyo kala duwan, iftiinka ballaaran ee 'UVC light' wuxuu dilaa fayrasyada iyo bakteeriyada, waxaana hadda loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo qalabka qalliinka. Cilmibaarista socota waxay sidoo kale muujineysaa in shucaaca UV uu awood u leeyahay inuu labadaba nuugo oo uu hawlgaliyo fayraska SARS -COV oo ay weheliso H1N1 iyo noocyada kale ee bakteeriyada iyo fayrasyada.
Dan kasta oo dheeraad ah oo ku saabsan sifaynta hawada, ku soo dhawow inaad nala soo xiriirto si aad u hesho faahfaahin dheeraad ah iyo qiimo dhimis.
Best Home Air miira Uk , Home Air miira, Dabcan badhxaan Home Air miira , UV Home Air miira , Ozone Air Sifee Home Depot , Air miira Waayo Home gur, All Products